कुन साधन परिवार नियोजनका लागि अति उत्तम मानिन्छ ? थाहा पाइराखौं – Everest Dainik – News from Nepal
कुन साधन परिवार नियोजनका लागि अति उत्तम मानिन्छ ? थाहा पाइराखौं
पुस २३ ।
हाम्रो इच्छाविपरीत कहिलेकाहीँ गर्भ बस्छ र बच्चा जन्माउन बाध्य हुनुपर्छ । यसको कारण परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग सही तरिकाले नगर्नु पनि हो । नचाहँदा नचाहँदै बच्चा जन्मन नदिन के गर्ने ? हामीले परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ । यी साधनबारे जानकारी पनि लिन सक्नुपर्छ ।
सुत्केरी महिलाले बच्चा जन्मेको ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान मात्र गराएमा यसले गर्भधारण हुनबाट बचाउँछ । यो विधि प्रभावकारी बनाउन बच्चालाई पूर्णरूपमा स्तनपान मात्र गराउनुपर्दछ । अन्य खाना वा झोल कुरा खुवाएको हुनुहुँदैन । बच्चा ६ महिनाभन्दा कम उमेरको हुनुपर्दछ । महिलाको महिनावारी फर्केको हुनुहुँदैन । यी सबै अवस्था पूरा भएको खण्डमा ९८ प्रतिशत गर्भ रहँदैन । यीमध्ये कुनै एउटा प्रभावकारी भएन भने गर्भ रहन सक्छ ।
यो महिलाको पाठेघरमा राखिने एउटा प्रभावकारी साधन हो । यसलाई महिला प्रसूति भएपछि साल निस्कनासाथ १० मिनेटभित्र राख्नुपर्दछ । नभ्याएमा बच्चा जन्मेको ४८ घन्टाभित्र, शल्यक्रिया गरिएको समयमा, सुत्केरी भएको चार हप्तापछि पनि पाठेघरमा राख्न सकिन्छ । एकपटक राखेपछि यसले १२ वर्षसम्म काम गर्दछ । आइयुसिडी ९९ प्रतिशत प्रभावकारी हुन्छ । यदि महिलालाई पुनः गर्भधारण गर्न मन लागे तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी कहाँ गएर निकाल्न लगाउने, उनीहरूले सहज रूपमा निकाल्ने गर्दछन् । यसरी निकालेपछि महिला फेरि गर्भधारण गर्न सक्छन् । बच्चाको स्तनपानमा यसले कुनै पनि असर गर्दैन ।
महिला वा पुरुषले गर्ने स्थायी बन्ध्याकरण एउटा अति प्रभावकारी विधि हो । स्थायी बन्ध्याकरण गर्दा सानो शल्यक्रियाको आवश्यकता पर्दछ । बच्चा जन्माएको ७ दिनदेखि ६ हप्ताभित्र महिला बन्ध्याकरण गर्न सकिन्छ । पुरुष बन्ध्याकरण भने जुनसुकै समयमा पनि गर्न सकिन्छ । यो विधि अपनाएपछि पुनः अर्को बच्चा हुँदैन । पूर्णरूपमा बन्द हुने भएकाले बच्चाको आवश्यकता पूरा भएपछि यो विधि अपनाउन सकिन्छ ।